Maxey ku dagaaleyn Xildhibaan Luul Cabdi Aadan iyo Xildhibaan Muno Kay? – Kalfadhi
Maxey ku dagaaleyn Xildhibaan Luul Cabdi Aadan iyo Xildhibaan Muno Kay?
MUQDISHO, 16 JAN 2019 (KALFADHI)-Waxaa saacadihii la soo dhaafay aad loo hadal haayay dagaal gacan ka hadal ah oo Isniintii todobaadkaan dhaxmaray laba Xildhibaan oo Haween ah kana tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Dagaalkaan gacan ka hadalka ah ayaa ka dhacay Xarunta Golaha Shacabka markii uu soo dhamaaday kulankii ugu dambeeyay ee Kalfadhiga 4-aad 14kii bishaan.
Xildhibaanada dagaalamay ayaa lagu kala magacaabaa Muno Khaliif Abuu (Muna Kay) iyo Luul Cabdi Aadan. Sidoo kale dagaalka ayaa waxaa qeyb ka aheyd Maryam Khaliif Abuu oo la dhalatay Xildhibaan Muna Kay. Maryam ayaa ka tirsan Shaqaalaha Dowladda waxaana Gaariga Xildhibaan Muna Kay lagu geeyay banaanka Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Si rasmi ah looma oga waxyaabaha ay ku dagaalamayn labadaan Xildhibaan waxaana arintaan gacanta ku haayo Ciidamada Booliiska Soomaaliya iyo Xildhibaano kale oo ka tirsan Golaha Shacabka. Sidoo kale Wasiirka Arimaha Diinta iyo Awqaafta ayaa la sheegay inuu ka mid yahay dadka arintaan xalkeeda ku jira.
Xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo la hadashay Kalfadhi ayaa sheegtay iney isugu tageyn Xildhibaan Muna Kay iyo Maryam Khaliif kadib dagaal ka dhacay banaanka Xarunta Golaha Shacabka sida ay hadalka u dhigtay. Sidoo kale Xildhibaan Muna Kay ayaa sheegtay in walaasheyd aysan qeyb ka aheyn dagaalka balse laga been sheegay.
“Aniga oo ka soo baxay xarunta Baarlamaanka oo maraya jaran-jarada ayaa kawar helay dagaal, Gabar aanan aqoonin iyo Xildhibaan Muna Kay ayaa isugu kay tagay, mar dambe ayaa la’iisheegay in Gabadha ila dagaashay ay la dhalatay Xildhibaan Muna Kay”, ayey Kalfadhi u sheegtay Xildhibaan Luul Cabdi Aadan.
“Hada ayaa koomo ka soo baxay, dhaawacyo culus ayaa lay gaarsiiyay, Gabadhiina waxaa damaanad ku soo daayay Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka balse markale ayaa la qabtay iyadoo Garoonka ka duulaysa”, ayey u sheegtay Kalfadhi Luul Cabdi Aadan oo ka tirsan Golaha Shacabka.
Xildhibaan Muna Khilaaf Abuu (Muno Kay) ayaa sidoo kale faah faahin ka bixisay dagaalkii ka dhaxmaray iyada iyo Xildhibaan Luul Cabdi Aadan, kaas oo ka dhacay Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Muna Kay ayaa warbaahinta u sheegtay in dagaalka aysan ku lug laheyn walaasheed balse ay dagaalameyn iyada iyo Xildhibaan Luul.
“Aniga iyo Xildhibaan Luul ayaa is heysanay kadib Xildhibaano kale ayaa ii qabtay oo iska dhigayay dad nakala celinayay, Walaashey markaas ayaa loo sheegay in aan dagaal ku jiro waana ii timid oo meel iga fogba ma joogin”, ayey u sheegtay Tvyo maxali ah oo ku yaala magaalada Muqdisho.
“Walaashey waa shaqaale Dowladeed, aniga iyo iyada hal gaari ayaa nagula qaadaa, gaarigayga ayaa soo qaaday aniga ayeyna iga soo mareyn xarunta Golaha Shacabka sidaas ayey ku soo gashay Baarlamaanka”, ayey hadalkeeda sii raacisay Muna Kay.
Xildhibaan Luul Cabdi Aadan ayaa ka gaabsatay iney faah faahin ka bixiso sababtii ay u dagaalameyn, mar aan weydiinay ayey ka gaabsatay iney ka hadasho sababta dagaalka waxayna jawaabteeda ku soo koobtay “ma jirin wax colaad ah oo naga dhaxeysay sababtii ay iila dagaashay iyada hala weydiiyo”.
Xildhibaan Muna Khaliifa Abuu (Muna Kay) ayaa warbaahinta u sheegtay in dagaalka uu ka dhashay go’aankii ay ku diiday Xeerka waxkabadalka maamulka Bagiga dhexe oo 14-kii bishaan ay Baarlamaanka cod u qaadeyn.
“Waxaa layla dagaalay go’aankii aan ku diiday in qof ajnabi ah Guddoomiye ka noqdo Bangiga dhexe, Xildhibanadda saaxiibtay waxay aheyd taageero Xukuumadda ah”, ayey warbaahinta u sheegtay.
“Walaashey Xukuumadda ayaa xirtay, waxaana loo xiray sababta aan aniga u taageeri waayay qorshaha Xukuumadda maadaama aan aniga lay xiri karin oo aan xasaanad leeyahay”, ayey hadalkeeda raacisay.
Qof katirsan shaqaalaha Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya iyo Sarkaal ka tirsan Ciiadmada Booliiska ee ilaalada Xarunta Golaha Shacabka ayaa Kalfadhi u sheegay in aysan ogeyn sababta balse ay jirto warar sheegaya iney ku dagaalamayn warar ay iska sheegeyn.
“Ma ogi sababta oo sax ah, balse waxaa jirta warar soo baxaya oo sheegaya iney ku dagaalamayn, war ayaa iga sheegtay iyo kaama sheegin”, ayuu Kalfadhi u sheegay qof katirsan shaqaalaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ka gaabsaday inaa adeegsano magaciisa iyo codkiisa.
Ciidamada Booliiska Soomaaliya ayaa markii ay damaanadda ku daayeen kadib markale soo xiray Maryam Khaliif Abuu oo la dhalatay Xildhibaan Muna Kay, kadib markii ay damacday iney u baxdo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Af-hayeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliya Qaasim Axmed Rooble ayaa faah faahin ka bixiyay sababtoo loo xiray Xildhibaanad Muno Kay walaasheed.
“Shalay waxaa noo soo dacwootay Xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo ka dacwooneysa eedeysane Maryan Khaliif Abuu oo la dhalatay Xildhibaan Muna Kay,ildhibaan Luul ay waxay aheyd dhibane dhaawac ka gaaray wejiga, waxaana u dirnay warqad caafimaad, iyadoo Booliska ay soo xireen Maryan Khaliif Abuu”, ayuu yiri Af-hayeenka Ciidanka Booliiska Soomaaliya.
“Waxaan ku sii deynay damaanad eedeysane Maryam Khaliif oo la dhalatay Xildhibaan Muno Kay, kadib waxaan kawar helnay iyadoo garoonka ka duulaysa waxaana markale ay Ciidaamda dhigayn Xabsi”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Qaasim Axmed Rooble.
Arintaan dagaalka ah ee dhaxmaray labada Xildhibaan ayaa saacadihii la soo dhaafay qabsatay baraha bulshada, waxaana dad badan ku jahwareereen sida wax u dhaceen. labada Xildhibaan ee dagaalamay ayaa qofba si uga hadlay arintaan waana sababtay keentay in shacabku ay ku jahwareeraan.
Labada Xildhibaan ee dagaalamay ayaa kawada tirasn Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, waana qaraabo isu dhaw. Waxay Baarlamaanka Soomaaliya ka soo galayn ama uu degaan doorashadoodu tahay degaanada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo safarkiisii ugu horeeyay uga baxay Puntland.
Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay